प्रदेश ३ अर्थमन्त्री ढुंगेललाइ हाम्रो प्रश्न: एक बर्षको काम के-के ? (सुन्नुहोस् कुराकानी)
मंसिर २४, २०७६ ०७:२१:५४
माघ ८, २०७५ हेटौंडा खबर
तीन नंमबर प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्नै लागेको छ । यो अवधिमा कानुन निर्माण गर्ने काममा प्रदेश सरकार बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना १३ वटा जिल्लामा जिल्ला स्तरका संरचना पनि एक सय वटा भन्दा बढी निर्माण गरेको छ । तीनै संरचना मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । तर चालु रकम खर्च भएपनि पुजीगत खर्च भने त्यती खर्च हुने देखिएको छैन ।
पुजीगत खर्च रकम यो आर्थि बर्षमा ६० प्रतिशत सम्मगर्न सक्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । प्रदेश सरकारको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा जनताले देख्ने काम के गर्नुभयो त ? भनि हामीले तीन नंम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेललाई सोधेका छौं ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, माघ ८, २०७५, ०८:०१:००
प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरु गरेका काम के-कसरी अघि बढ्दैछन् ? मन्त्री दुलाल संगको कुराकानी
अपराधी समाउन सफल प्रहरी: प्रहरी निरिक्षक मधु थापा संगको बिशेष कुराकानी (सुन्नुहोस्)
मुख्यमन्त्री पौडेललाई हाम्रो प्रश्न: अहिले सम्मको प्रगति के ? राजधानीको टुङ्गो कहिले लाग्छ ? बिधुतिय बस कहिले गुड्छ ?
कानुन बिपरित कर उठाउनेको अनुदान रोक्छौं : मुख्यमन्त्री (सुन्नुहोस् कुराकानी )
मकवानपुरमा करिब ८ हजार मात्र घर पुनःनिर्माण भए, कहिले सम्म बनिसक्छ घर? (कुराकानी )
पुष १३, २०७५ हेटौंडा खबर
भुकम्पपछी मकवामनपुरमा ७ हजार ८ सय ३५ घर पुन निर्माण भएका छन् । भुकम्पले ढलेका करिब ३३ हजार घर मध्यमा करिब आठ हजार वटा मात्र घर निर्माण भईसकेका हुन् । पहिले पुन निर्माणले गति नलिएपनि अहिले जनप्रतिनिधि आएपछी घर निर्माणले अली बढी गति लिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्